Sombiny 9 Mahagaga amin'ny maritrano London ankehitriny | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | England, Londres, Inona no ho hita
Tanàna efa an-jato maro no tsy miavaka amin'ny karazana maritrano. Niaina nandritra ny taonjato maro izy ireo ary angamba nandalo ady na krizy anatiny, noho izany ny làlambe sy ny tranony dia taratry ny fisiany lava.
Ny renivohitry ny Fanjakana Mitambatra dia iray amin'ireo tanàna ireo. Rehefa nandeha ny taonjato London dia nanangona fomba isan-karazany amin'ny maritrano ary hita izany amin'ny tranom-bahoaka, tranobe tsy miankina ary andrim-panjakana hafa na volavolan-tanàna. Fa ny marina dia tato anatin'ny folo taona lasa dia lasa tanàna misy azy maritrano maoderina mahavariana. Nohavaozina i London nandritra ny taonjato faha-XNUMX.
1 Momba an'i London
2 Maritrano maoderina any Londres
2.4 Lapan'ny tanàna London
2.5 Tranon'i Lloyd
2.7 Dome Arivotaona
2.9 Tetezana Arivo Taona
Momba an'i London
Londres dia renivohitry ny Fanjakana Mitambatra ary ny fo politikany, koltoraly ary toekarena. Mipetraka eo amoron'ny renirano Thames izy io ary roa arivo taona. Ny Romana no nanorina azy ary nanana an'io fotoana io ny anaran'i Londinium ary ny faritany dia i Britain Britain.
Rehefa nianjera teto ny Fanjakana Romanina dia nitranga ny zava-nitranga tany Eropa hafa: nandroso tamin'ny tanàna ny firenena barbariana ary a Fipetrahana Anglo-Saxon naka endrika. Na dia nijaly aza ny fanafihana Viknika maro dia tsy hianjera intsony i Londres ary handalo fotoanan'ny medieval sy vanim-potoana nifandimby.
Amin'izany fomba izany ankehitriny dia hitantsika eny an-dalambe izay misy ohatra maritrano samihafa: Renaissance Medieval, Zeorziana ary araka ny efa nolazainay tetsy ambony, matetika dia maro hatrany ohatra amin'ny maritrano maoderina tsara indrindra eto an-tany.
Maritrano maoderina any Londres
Maro amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny maritrano maoderina izy ireo ao amin'ny distrika ara-bola. Manana ny Tranon'i Lloyd, ny Dome Arivotaona, ny Heron Tower, ny Tetezana Arivo Taona, ny Tetezana Shard London, The Gherkin, la London Eye, la Tower 42 ary ny Lapan'ny tanàna London ankoatry ny hafa. Andao hijery manokana kokoa:
Ny tena anaran'ity trano London malaza 30 St Mary Ax io. Skyscraper any amin'ny faritany ara-bola izy io. Nanomboka tamin'ny 2003 ny fanamboarana ary nifarana herintaona taty aoriana. Rihana 41 no misy azy ary 180 metatra ny haavony. Izy io dia mitana ny toeran'ny trano natokana ho an'ny varotra sy ny vola izay simba tamin'ny fanafihana IRA tamin'ny 1992.
Tranobe io mahomby angovo, manana rafitra rivotra voajanahary sy rafitra manampy amin'ny fitehirizana ny hafanana sy ny hatsiaka, miankina amin'ny vanim-potoana.
Ity skyscraper ity 230 metatra ny haavony misaotra andry 28 metatra. Izany dia tranobe avo indrindra any London. Nanomboka ny taona 2007 ny fanamboarana ary vita tamin'ny 2011. Izy io dia manana faritra fidirana sy fandraisana lehibe ary misy aquarium misy trondro 1200 mahery. Io no aquarium manokana lehibe indrindra eto amin'ny firenena.
Misy ihany koa ny fisotroana - trano fisakafoanana amin'ny rihana voalohany ary amin'ny rihana 38 ka hatramin'ny 40 trano fisakafoanana sy mahazatra lanitra - fisotroana misy terraces ivelany izay tratran'ny ascenseur mahafinaritra, izany hoe zavatra mangarahara.
Es iray amin'ireo trano avo indrindra any London ary namboarina mba hipetrahan'ny biraon'ny Westminster National Bank. Naorina tamin'ny taona 70 sy nosokafana ara-dalàna tamin'ny 1981. Queen Elizabeth II dia nanao izany tamin'ny gala sy ny zava-drehetra. eFA 183 metatra ny haavony ary tamin'ny taona 2009 ny Heron Tower ihany no nihoatra izany taorian'ny telopolo taona nanjakany.
Biraon'ny birao sy foiben'ny orinasa io. Tamin'ny taona 90 voan'ny fanafihana IRA Niteraka fahasimbana lehibe izany ary voatery haverina ao anatiny sy ivelany.
Lapan'ny tanàna London
Toerana misy ny governemanta monisipaly izy io ary eo amin'ny morony atsimon'i Thames. eFA endrika tsy dia mahazatra loatra izay manenjika ny hevitra fitsitsiana angovo amin'ny alàlan'ny fampihenana ny velaran'ny firafitra mihitsy. Tsy mandeha izany, raha ny fanadihadiana natao taty aoriana.
Ny olona sasany dia mampitaha ny lapan'ny tanàna London amin'ny atody na amin'ny saron-tava darth vader, avy amin'ny Star Wars ary tsy dia misy tsiro ny olona dia niantso azy io ho "testicle vera". Inona ny hevitrao? Raha ny famolavolana dia manana a Dia an-tongotra elliptical 500 metatra mitovy amin'ny Museum Guggenhaim any New York izay miainga avy any amin'ny fotony ka hatrany amin'ny tendron'ity Trano fanaovana tantara 10.
Manana a deck fandinihana izay misokatra ho an'ny besinimaro indraindray, fa rehefa miakatra ny lalambe ianao dia afaka mahita ny atin'ny tranobe sy ny manodidina.
Ity trano maoderina ity dia ao amin'ny distrika ara-bola ary izy dia iray amin'ireo foiben'ny tranon'ny fiantohana malaza an'i Lloyd. Niorina tamin'ny taona 70 ' ary io dia notokanana tamin'ny tapaky ny taona 80, namboarin'ny Mpanjakavavy indray.
Ity tranobe maoderina ity manana ny ascenseur, tohatra, tobin-herinaratra ary fantsona ivelany, amin'ny fomban'ny Center Pompidu¡ou any Paris. Izy io dia misy tilikambo lehibe telo miampy tilikambo telo manompo manodidina ny toerana mahitsizoro afovoany.
Ny efitrano afovoany, ny AtriumMisy valindrihana fitaratra miakatra izy ary misy toerana malalaka sy escalator na aiza na aiza. Fatra totalin'ny Metatra 88, misy rihana 14 io.
Es ny London Ferris Wheel, fahitana maoderina ny kodiarana Ferris klasika izay hitantsika any amin'ny tanàna hafa manerantany. Eo amoron'ny renirano izy io ary fantatra amin'ny hoe Millennium Wheel. 183 metatra ny haavony ary 120 metatra ny savaivony.
Ny kodiarana Ferris dia naorina tamin'ny taona 1999 ary io no kodiarana Ferris avo indrindra eran'izao tontolo izao mandra-pananganana an'i Nanchang, saingy mbola io ihany ny avo indrindra any Eropa. Vy be dia be, tariby maro ary gondola mahafinaritra be toa ny foronina amin'ny siansa.
Rehefa nanomboka ny fankalazana ny fiandohan'ny taonarivo fahatelo tany London dia natsangana teo amin'ny saikinosy Greenwich, atsimo atsinanan'ny tanàna ity trano ity. Naharitra hatramin'ny Desambra 2000 ny fampirantiana tao anatiny.
Es iray amin'ireo domes lehibe indrindra manerantany. Fotsy izy io ary misy tilikambo mavo 12, iray isam-bolana amin'ny taona iray na iray isaky ny adiny iray amin'ny famantaranandro dia efa ao Greenwich isika. Ilay dome 52 metatra ny haavony eo afovoany ary anaovana ampahany amin'ny fiberglass mahatohitra ny fandehan'ny fotoana.
Skyscraper misy rihana 95 izy io. Manana kely noho ny 300 metatra ny hahavony ary nanomboka natsangana tamin'ny taona 1999 ka vita hatramin'ny 2012. Izany dia noforonin'i Renzo Piano, mpanao mari-trano malaza miaraka amina tranobe sy firafitra maoderina marobe am-pitiavana.
Manana izany endrika miolikolikaToa mivoaka avy ao anaty renirano io, vera be dia be ary raha ny fahitako azy dia endrika marefo. Tranobe io mahomby amin'ny fanjifana angovo ary manamorona ny gorodony izy io dia misy biraon'ny orinasa, trano fisakafoanana, sekolin'asa tsindraindray, biraon'ny Al Jazeera any Londres, hotely, trano fisakafoanana sy trano fandinihana.
Tetezana Arivo Taona
Izany dia tetezana mpandeha an-tongotra vy fampiatoana miampita ny renirano Thames. Ampifandraiso amin'ny Bankside ny tanàna. Natao tamin'ny fizarana telo izy io, ny tsirairay avy lava kokoa, mandra-pahatonga any amin'ny tetezana a ny halavany 325 metatra mihantona amin'ny tariby, valo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » England » London dia manana maritrano maoderina koa